Xog dheeraad ah oo kasoo baxaysa dib u eegista tibxaha heshiiska DF iyo shirkadda Albayrak (Tuhun ku saabsan boqolleeyda) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xog dheeraad ah oo kasoo baxaysa dib u eegista tibxaha heshiiska DF...
Xog dheeraad ah oo kasoo baxaysa dib u eegista tibxaha heshiiska DF iyo shirkadda Albayrak (Tuhun ku saabsan boqolleeyda)
(Muqdisho) 12 Okt 2020 – DF Somalia iyo sharikadda Turkish-ka ah ee ka howlgasha Dekedda Muqdusho ee Albayrak ayaa beri dhowayd la sheegay inay heshiis cusub wada galeen.
Yeelkeede, lama sheegin wax ka badan in waqtiga heshiiska oo awal 20 sanadood ahaa haatan lagu koobay 5 sanadood oo shuruudaysan.
Haatan ayaa waxaa soo baxaysa in heshiiska laga dhigay 14-sanadood iyadoo sidoo kale wax laga bedeley agaasinka dakhli wadaagga, kaddib wada xaajoodyo musalsal ahaa oo dhinacyada dhexsaday.
Heshiiskan oo ay qalinka ku aastay dhanka DF Wasiiradda Dekedaha, Maryan Aways Jaamac, ayaa sharikadda siinaya xuquuqda dhowran ee maamulista Dekedda Muqdisho iyo dakhligeeda, iyadoo wax laga bedeley tibxaha heshiiskii hore ee la galay 2013-kii oo dhigayey 20 sanadood.
Waxaa kale oo heshiiskan ka mid ah in adduun dhan $50 milyan oo doollar oo iskugu jirta maalgelin iyo hormarin lagu bixiyo dekedda muddo 5 sanadood ah oo kaddib heshiiska dib loo eegi doono, sida uu sheegay Ku Simaha RW Xigeenka.
Waloow heshiiskani uu u muuqdo mid yare dhaama midkii hore misna weli uma faahfaahsana si ku filan, tusaale ma cadda boqolleeyda la kala helayo sababta ay wax aad u badan ugu yeelanayso shirkaddu iyadoo loo malaynayo inay taa sabab u tahay in uu jiro heshiis hoosaad ay boqolleeyda shirkadda qayb uga yihiin madaxda qaarkood.
Previous articleMW Eritrea oo Gobolka Oromiya ku tegey booqasho ay qoonsan karaan Maamulka Tigreegu + Sawirro
Next articleAzerbaijan oo hubkii ugu badnaa bishan ka iibsatey Turkiga (Maraykanka, Imaaraadka & dalal kale oo hub badan ka iibsadey)